छोरा बुहारीले कोठामा के गर्छन ? भनेर हेर्न जव सासुले आफ्नै कोठामा लगाइन सीसीटीभीको मोनिटर – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/छोरा बुहारीले कोठामा के गर्छन ? भनेर हेर्न जव सासुले आफ्नै कोठामा लगाइन सीसीटीभीको मोनिटर
काठमाडौं । परिवारका सदस्यमा विश्वास भएन भने दुर्घटना निम्तन्छ । भारतको त्रिपुराकी एक महिलाले आफ्ना श्रीमानविरुद्ध उजुरी दिन राज्य महिला आयोग पुगिन् । घटना सुनेर प्रहरी नै छक्क परे । श्रीमानले घर भरी सीसीटीभी क्यामेरा लगाएको भन्दै उनी प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन् ।
महिलाका अनुसार क्यामरा मेन गेटमा, सासुको कोठामा, बैठकमा र श्रीमान श्रीमतिको कोठामा पनि राखिएका थिए । श्रीमान श्रीमतिको कोठामा पनि क्यामेरा लगाएपछि उनलाई आपत्ती थियो । क्यामराको मोनिटर सासुको कोठामा फिट थियो जहाँबाट निगरानी राखिन्थ्यो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
४६ बर्षका यी पुरुषसँगै किन पक्राउ परे यी दुई भर्खरका युवती? कारण थाहा पाएर पर्नु हुन्छ अचम्ममा